Usatengese Izvo Zvese paOganiki Isu | Martech Zone
Takave nekukurukurirana kukuru nemumwe wevatengi vedu mukupera kwesvondo uyo anowanzo pinda mukati uye achikumbira mhinduro maererano nesaiti, analytics, uye mimwe mibvunzo maererano neiyo inbound yekushambadzira zano. Ini ndinoda chokwadi chekuti ivo vari kuita, vazhinji vevatengi vedu havasi… asi dzimwe nguva kuedza kwazvinotora mukupindura nekutsanangura zvikonzero zvatiri kuita zvinotorera pabasa chairo pacharo.
Imwe kiyi yekutaura yaive yekuti ivo chete mari is iyo organic yekukura zano iri kuteedzerwa online. Kunyange ini ndichida chokwadi chekuti isu tiri mukutarisira izvo, zvinokatyamadza ini kuti iyi ndiyo yega nzira irikudyarwa mukati. Ndakagara ndichiudza vanhu kuti kuvaka organic online kuvepo kwakafanana nekuvaka chitoro, resitorendi kana hofisi. Chitoro chinofanirwa kunge chiri pakati (kutsvaga uye kugarisana), chinofanira kukwezva vashanyi chaivo (dhizaini nekutumira mameseji) uye chinofanirwa kushandura tarisiro kuva vatengi (mafoni kune chiito uye mapeji ekumhara).
Asi kana iwe ukavaka chitoro chakanaka, chiwane icho mushe, uye unogona kushandura vashanyi vako kuva vatengi… basa harina kupera:
Iwe uchiri kuda kushingairira shambadza chitoro chako. Ini handina basa nekuti ndiwe ani, zvakakosha kuti ubude kunze uko wosvinudza nyama, uvake zvinotevera, uye ubatanidze vamwe munharaunda. Chitoro chikuru munzvimbo huru ine vanhu vakuru uye zvigadzirwa zvichiri kuda kusimudzirwa nguva nenguva. Saiye muridzi webhizinesi, haugone kugara pasi uye kumirira kuti bhizinesi riuye, iwe unofanirwa kuenda kunoritsvaga iwe uchakamirira yako online yekushambadzira zano kuti ikudziridze.
Maitiro ehupenyu senge izwi remuromo inogona kukura bhizinesi rako, asi kwete nekumhanya kwaunoda iwe! WOM zano rakanakisa uye rinowanzo gadzira mhando dzemhando yepamusoro. Asi izvo zvinotungamira zvinotora nguva - saka unogona kuzopa zvinowedzera zvinokurudzira kutyaira traffic nekukurumidza. Kana iwe ungangoda chete kutenga traffic kuburikidza nekubhadharisa pakubhiti kose, kutsigira uye kunyangwe mabhenji kushambadza. Iyo inodhura, asi inogona kukuwanira iwe yakawanda yakawanda traffic nekukurumidza.
Kukura kwehupenyu kunotora nguva. Iyo huru online yekutengesa zano inovaka kukosha uye chiremera zvishoma zvishoma panguva. Sezvo iwe urikubhadhara iyo yekushambadza mabhiri, inokwira maitiro haigare iri nyaradzo kana paine mabhiri mazhinji ari kuuya mukati kupfuura mari… asi iwe unofanirwa kutarisa iwo kumusoro mudenga uye maitiro uye wozvitarisa pazviri gore kunze, makore maviri kunze uye makore mashanu kunze. Mabhizinesi mazhinji anoisa mari pamhepo uye vanotarisira kuti vachave nevese bhizinesi ravanoda mumazuva makumi matanhatu kusvika makumi mapfumbamwe anotevera. Kazhinji hazvisizvo.
Usatengese zvese pane kukura kwehupenyu. Kana ... kana iwe uchidaro, ita chokwadi chekusiya nguva uye zviwanikwa kuti ubatsire kusimudzira uye kuburitsa izwi panzira yako yekutengesa pamhepo. Iwe haugone kungorasa boka remari mune yakanaka webhusaiti uye yakanaka zvemukati uye kutarisira mibairo yakanaka - pane zvakawanda zvekuita. Chandinoshuvira chete kune uyu mutengi ndechekuti ivo vanoisa yakawanda yekuita muchiitiko chavanogona kudzora pane kukwevera kutarisa kwedu kure. Ivo vakatipa isu nezano ravo… uye padyo nemutengi, hapana munhu anoda kuti ibudirire kupfuura isu!
Tags: isina nziraonline kushambadzira zanoonline zano
Wepamusoro mashanu Matipi eSurvey Ukuru
Emailvision uye Pinterest: Pini Yako Inbox Makwikwi
Apr 25, 2012 pa 9: 55 AM
Chirongwa chekutengesa chinofanira kunge chakatenderedzwa zvakanaka. Iyo organic kukura zano pamhepo yakakosha, asi ichashanda zvakanyanya mukufamba kwenguva kana ichiperekedzwa nekumwe kuedza kwekushambadzira. Iwe haumbodi kuisa mazai ako ese mubhasiketi rimwe chete sezvo vatengi vanogona kupindirana nemhando yako pane akawanda akasiyana touchpoints.